Lwesithathu 22 Septhemba 2021
Lwesibili 21 Septhemba 2021
Isinamoni Roll Noju
Msombuluko 20 Septhemba 2021
Isinamoni Roll Noju I-ezulwini Drop ingumugqa wesinamoni ogcwele uju olumsulwa olusetshenziselwa itiye. Umqondo kwakuwukuhlanganisa ukudla okubili okusetshenziswa ngokwehlukana nokwenza umkhiqizo omusha. Abaqambi baphefumulelwa ukwakheka komdwebo we-sinamoni, basebenzisa ifomu labo eliyi-roller njengesitsha soju futhi ukuze bapakishe imisipha yesinamoni babesebenzisa i-beewax ukuhlukanisa nokufaka imiqele yesinamoni. Inezithombe zaseGibhithe ezivezwe ebusweni bayo futhi yingoba abaseGibhithe bangabantu bokuqala abakubona ukubaluleka kwesinamoni futhi basebenzisa uju njengengcebo! Lo mkhiqizo ungaba uphawu lwezulu ezinkomishini zakho zetiye.
Sonto 19 Septhemba 2021
Ukudla Phuza Ubuhle kufana negelasi elihle ongaliphuza! Senze inhlanganisela yezinto ezimbili ezazisetshenziswa ngokwahlukana netiye: I-Rock candies kanye nezilayi zezilamula. Lo mklamo ungadli ngokuphelele. Ngokwengeza izingcezu zikalamula esakhiweni se-rock candy, ukunambitheka kwawo kuba ngcono kakhulu futhi inani lakhe lokudla lenyuka ngenxa yamavithamini kalamula. Abaklami bavele bamiselela izinti okwabanjelwa kuzo amakristalu e-rock candy ngesigaxa selamula esomile. Isiphuzo Ubuhle yisibonelo esiphelele sezwe lanamuhla eletha ubuhle nokusebenza kahle ndawonye.
Mgqibelo 18 Septhemba 2021
Lwesihlanu 17 Septhemba 2021
Ikhola Yezinja Ikhola Yezinja Isinamoni Roll Noju Ukudla Isiphuzo I-Capsule